Wednesday February 12, 2020 - 19:23:06 in Wararka by
Insha’allaah ma badin doono hadalka waxaana inta karaankey ah soo koobi doonaa dulucda maqaalka oo ah mid mid muhiimaddiisa xambaarsa inana tusaya saameynta uu Federalisimku ku yeelanayo dadkii ummada indhaha u ahaa.
Dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ee Febraayo gudoomiyaha gobolka Awdal ee "Somaliland” C/raxmaan Axmad Cali ayaa meel madal ah ka caayay Diinta Islaamka goobtaas oo ay dad badan ku sugnaayeen.
Inkastoo aaney saxaafaddu goob joog ahayn haddana warku si aad ah ayuu u baahay maadaama uu ahaa mid bulshada taabanaya, kana dhan ah diinta. Taas waxay keentay in qaar kamid ah culimada ku dhaqan gobollada Waqooyi Galbeed ay ka hadlaan iyagoo waliba taxadar badan muujinaya kadib markii ay heleen marqaatiyaal badan.
Hadal iyo dhammaantii, fataawidii culimadu wey socon weyday maadaama ay ahaayeen dad kooban oo aan badnayn, dhanka kalana handadaad kala kulmay qaar kamid ah Wasiirrada maamulka iyo Gudoomiyaha Diin Caayga ah qudhiisa oo ku tilmaamay "Argagixiso” (Islaam anafo leh)
Natiijadu waxay noqotay in ninkii diinta caayay uu mas’uul sii ahaado isagoo waliba awood leh, culimadii ku dhagganayd ee ficilkiisa ka fal celiyayna ay noqdaan (Afkii baa juqda gabay)
MAXAA FARQI AH OO U DHAXEEYA NINKAN IYO INA C/SHAKUUR?.
Sida ku cad Shareecada Islaamka qofkii caaya diinta Allaah wuu ku gaaloobayaa, mana jiro wax farqi ah oo u dhaxeeya in la caayo Allaah, Rasuulkiisa iyo Diinta oo dhan.
Qur’aanka kariimka iyo Axaadiithta marnaba kuma arag nusuus dadka ku kala farqineysa degaanada ay ku kala nool yihiin ama qabiillada ay kasoo kala jeedaan, oo haddii uu midkood caayo diinta uu gaaloobayo, midina uusan gaaloobeyn!.
Inkastoo C/raxmaan uu sheegay inuu ka towbad keenay falkii Diin Cayga ahaa haddana ficilkii uu sameeyay iyo kan uu ku dhaqaaqay Barasaabka Awdal, ma jiraan wax farqi ah oo u dhaxeeya, bal waxaaba sii halis badan kan Barasaabka oo isku fuuqsaday Diinta oo dhan.
AAWAY CULIMADII INA C/SHAKUUR ISKA LALMISAY?
Culimadii C/raxmaan C/shakuur ciriiriga galisay waxay intooda badan ahaayeen kuwa ku nool magaalada Muqdisho. Runtii aniga aad baan ugu amaanaa arrintaas, mid kastoo aan arko ama aan Telefoon isku helnana waan ku dhiira galiyaa tallabadaas iyada ah, inkastoo aan dhanka kale ku dhaliilo inuusan jirin nin xukumay C/raxmaan, illeen fal kasta xukun ayaa ka dhasha e’.
Culimadu markay gaalnimadii C/raxmaan ka hadlayeen waxay u muuqdeen rag qiireysan laakin waxaan la yaabanahay halka ay haatan aaday qiiradaas!
Fadlan sirta ugu weyn ee meesha ku jirta iga hoo. C/raxmaan C/shakuur waxay aad u dagaashanaayeen walina dirirsan yihiin madaxweyne Farmaajo waana taas midda keentay in culimo badan ay ku dhiiradaan iney hadlaan, kuwaasoo isugu jira qaar dowladda ka tirsan, kuwa aan kamid ahayn balse yaqiinsaday in aanan qadiyaddaas loo xiri doonin iyo in yar oo caan ku ahaa ineysan xaqa la gabban bulshaduna wada garanayso.
Dhammaan culimadaas ma aanan arag mid ka hadlay barasaabka Awdal ee diinta caayay. Xaajadu waxay u muuqataa in arrintaas loo daayay oo kaliya wadaadaha jooga Wuqooyi Galbeed. Wadaadoow miyaaney diintu xil idiinka saarnayn meel walboo aad joogtaan? Allah marki aad berri hor tagto makaa yeelayaa dalka Federalisim ayuu ahaa?
DARDAARAN KU SOCDA DADKA SOOMAALIYEED
Waxaan qirayaa in gayigeena iyo dibaddaba ay ku nool yihiin culimo Soomaaliyeed oo rabaaniyiin ah waxaana leeyahay sii wada dadaalkiina ogaadana in aysan jirin cid bacdallaah ummada u maqan oo aan adinka ahayn, Culimada fataawadoodu iibka tahay ama federaaleysan tahay waxaan u sheegayaa iney Alle ka baqaan oo xasuustaan sifaadka xun ee uu Allaah siiyay kuwa cilmiga xambaaray ee haddana aan ku camal falin.
Soomaalida waxaan leeyahay diintu cidna uma afduubna, Allaah wuu fududeeyay barashadeeda ee halagu dadaalo, cilmiga iyo diintana aan ka qaadano kuwa aan danaha siyaasad ka lahayn, balse ay ka tahay Alle dartii.
Dhacdo Walba Aan Wax Ka Barano.
kala xiriir Facebook Page
Maamulka 'Galmudug' oo yeeshay Madaxweynihii Sedaxaad.